14 Kulliyadaha Injineerka Aerospace ee ugu Fiican Hindiya 2022
14 Kulliyadaha Aerospace Engineering ee ugu Fiican Hindiya
Kulliyadaha injineernimada aerospace ee Hindiya ma ahan kuwo caan ah ama aad looga yaqaan kuwa ugu fiican adduunka laakiin waxay bixiyaan mid ka mid ah waxbarashada injineernimada hawada ugu fiican. Qoraalkan baloogga ah wuxuu daaha ka qaadaa kulliyadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya, isagoo ku siinaya aragti ku saabsan dugsiga kugu habboon.
Injineerka Aerospace waa xirfad deg-deg ah, firfircoon oo khuseeya naqshadeynta, dayactirka, iyo hagaajinta dhammaan noocyada diyaaradaha, laga bilaabo diyaaradaha ilaa gantaalaha ilaa dayax-gacmeedka. Waa laanta injineernimada ee khuseysa cilmi baarista diyaaradda, naqshadeynta, horumarinta, dhismaha, tijaabinta, sayniska, iyo farsamada.
Dhinacyada aerodynamic ee diyaaradaha, oo ay ku jiraan dabeecadaha iyo waxyaabaha la xiriira sida baalasha, dusha koontaroolka, kor u qaadista, iyo jiidista, ayaa sidoo kale lagu baranayaa aaggan. Sanadihii la soo dhaafay, tiknolojiyadda aerospace -ku waxay isu beddeshay mid ka mid ah laba qaybood oo waaweyn oo is -dul -saaran tiknoolojiyadda hawada, tan kalena ay tahay cirbixiyeennada.
Adigoo ah injineer aerospace ah oo damacsan waxaad ku takhasusi kartaa mid ka mid ah labada nooc ee injineernimada:
Injineerka Aeronautical: Tani waa beerta injineernimada hawada oo ka shaqaysa ka shaqaynta diyaaradaha iyo qaybahooda
Injineerka Astronomical: Kani waa injineer ka shaqeeya dayaxgacmeedka iyo farsamooyinka la xiriira.
In kasta oo labada goobood si wada jir ah loogu yaqaan injineernimada hawada sare, qaar ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada ee Hindiya ayaa wax bara midkood ama labadooda waana lagaa haray inaad doorato midka aad doorbidayso.
Waqti aan fogeyn, waxaan daabacay maqaal ku saabsan kulliyadaha injineernimada aerospace ee ugu fiican Kanada, iyo maaddaama Hindiya ay tahay xudunta injineernimada iyo hormarinta teknolojiyadda waa iska caadi in sidoo kale laga wada hadlo kulliyadaha injineernimada hawada ee dalka kuwa danaynaya inay halkaas tagaan. Raadinta shahaadada injineernimada ee Hindiya waxay leedahay faa'iidooyinkeeda. Waxbarashadu waa raqiis waxaadna helaysaa shahaado si weyn loo aqoonsan yahay.
Haddii aad had iyo jeer xiisaynaysay farsamooyinka duulimaadka, markaa waa inaad raacdaa oo aad ka dhistaa xirfad ku xeeran. Waxaad aadi kartaa shahaadada bachelorka ama mastarka ee injineernimada aerospace oo aad ka bilaabi kartaa xirfad guul leh duulista iyo warshadaha hawada. Waxaa lagaa rabaa inaad guulaysato maxaa yeelay injineerada aerospace -ka ayaa baahi weyn u qaba adduunka oo dhan warshadahana waxaa la filayaa inay sii kordhaan sannadaha soo socda, gaar ahaan wada -hadallada kordhay ee sahaminta hawada.
Injineerka Aerospace ayaa adiga kugu habboon haddii aad raadinayso fursado injineernimo oo weyn, waxaad heli kartaa xirfadaha looga baahan yahay inaad noqoto xirfadle ku takhasusay warshadaha adoo raacaya shahaadada koowaad ama mastarka kulliyadaha injineernimada hawada ee Hindiya.
Marka laga reebo mawduuca ugu muhiimsan, maqaalkani wuxuu ka kooban yahay shax nuxur ah si uu kaaga caawiyo inaad si fudud ugu dhex wareegeyso boostada iyo qaar ka mid ah su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee khuseeya mawduuca doodda.
Su'aalaha la isweydiiyo ee Kulliyadaha Injineerinka Aerospace ee ugu Fiican Hindiya
Hindiya ma u fiican tahay injineernimada hawada?
Iskuulkee ugu fiican injineernimada hawada sare ee Hindiya?
Kulliyadaha Aerospace Engineering ee Hindiya
1. Machadka Farsamada Hindiya (IIT), Bombay
2. Machadka Farsamada Gacanta
3. Machadka Farsamada Hindiya (IIT), Madras
4. Machadka Hindida ee Sayniska Hawada iyo Teknolojiyadda (IIST)
5. Machadka Farsamada iyo Sayniska Hindustan (HITS), Chennai
6. Machadka Sayniska Hindiya (IISc), Bangalore
7. Machadka Farsamada Hindiya (IIT) Kanpur
8. Machadka Farsamada Hindiya (IIT) Kharagpur
9. Machadka Sathyabama ee Sayniska iyo Farsamada
10. Kulliyadda Injineeriyada Punjab (PEC), Chandigarh
11. Jaamacadda Xirfadle ee Quruxda badan (LPU), Punjab
12. Machadka Hindiya ee Injineerka Aeronautical Engineering (IIAE), Dehradun
14. Dugsiga Aeronautics
Hindiya waa tan saddexaad ee ugu weyn duulista rayidka, markaa haa waa meel u wanaagsan injineernimada hawada sare.
Machadka Teknolojiyadda Hindiya, Madras waa iskuulka ugu fiican injineernimada hawada sare ee Hindiya.
Jaamacado badan oo Hindi ah ayaa leh waaxyo injineernimo aerospace, halka kuwo kalena ay leeyihiin waaxyo injineernimo. Aerospace (ama aeronautical) injineernimada waxaa lagu baran karaa bachelor -ka, master -ka, iyo heerarka dhakhtarnimada. Shahaadooyinka injineernimada hawada sare ee ku wajahan meel bannaan ayaa laga heli karaa dhowr waaxood.
Hindiya waxay leedahay taariikh dheer oo leh injineernimada hawada. Shirkadda ugu horreysa, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), waxaa la aasaasay 1941. Machadka Sayniska Hindiya (IISc), Bangalore, wuxuu ahaa jaamacaddii ugu horreysay ee dadweyne ee wax ka dhigta waxna ku biirisa injineernimada hawada 1942. Qaab shirkado caalami ah oo caan ah, Hindiya waxay leedahay aerospace weyn.
Qaar ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya waa:
Machadka Farsamada Hindiya (IIT), Bombay
Machadka Teknolojiyadda Manipal
Machadka Farsamada Hindiya (IIT), Madras
Machadka Hindida ee Sayniska Hawada iyo Teknolojiyadda (IIST)
Machadka Sayniska Hindiya (IISc), Bangalore
Machadka Farsamada Hindiya (IIT) Kanpur
Machadka Farsamada Hindiya (IIT) Kharagpur
Machadka Sathyabama ee Sayniska iyo Teknolojiyada
Kulliyadda Injineeriyada Punjab (PEC), Chandigarh
Jaamacadda Xirfadleyda Quruxda badan (LPU), Punjab
Machadka Hindiya ee Injineerka Aeronautical (IIAE), Dehradun
Waxaa lagu aasaasay 1958 Powai, Bombay, Machadka Teknolojiyadda Hindiya, Bombay waa Machadka labaad ee teknolojiyadda Hindiya ee Hindiya oo dhan. Waxay caan ku tahay barnaamijkeeda injineernimada heer qaran iyo heer caalami labadaba. Machadku sidoo kale waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada aerospace ee ugu wanaagsan Hindiya, wuxuu bixiyaa 4 sano Bachelor of Technology (B.Tech) ama 5 sano Dual Degree (DD) ee Injineerka Aerospace.
Barnaamijka labada shahaadadood waa iskudarka bachelor -ka iyo mastarka marka la dhammeeyo, ardayda waxaa la siiyaa laba shahaado. B.Tech degree iyo shahaadada M.Tech oo ku takhasusay Aerodynamics, Dynamics, and Control, Propulsion, Structures, and Systems Design, or Engineering.
Waaxdu waxay sii bixisaa barnaamijyo jaamacadeed oo bixiya Ph.D. iyo ogolaanshaha Masterka ee ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Waaxda aerospace ee IIT Bombay, sida machadku caan ku yahay, ayaa ujeedadeedu tahay in la aasaaso caadooyin kobcin doona hal -abuurka iyo kobcinta heer sare.
Machadka Farsamada ee Manipal waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya, waxaa la aasaasay 1957 isagoo ka mid ah kulliyadaha injineernimada iskood u maalgeliya ee dalka. Dugsigu wuxuu bixiyaa saddex barnaamij oo duurka ku yaal; BTech ee Injineerka Aeronautical, MTech ee Injineerka Aerospace, iyo MTech ee Avionics.
Waaxdu waxay u oggolaanaysaa ardayda inay sameeyaan cilmi-baaris waqti-buuxa ah ama waqti-dhiman ah oo u baahan saddex iyo afar sano siday u kala horreeyaan si loo dhammaystiro.
Ku fiday dhul dhan 617 acres oo ku yaal Chennai, Tamil Nadu waa Machadka Teknolojiyadda Hindiya, Madras, oo hoy u ah baarkinkii ugu horreeyay ee jaamacad ku salaysan ee Hindiya. Waxaa la aasaasay 1959 sidii jaamacad farsamo iyo cilmi baaris dadweyne waxaana loo aqoonsaday inay tahay "Machadka Eminence". Machadku wuxuu leeyahay 17 waaxood oo ay ka mid yihiin Sayniska Kombiyuutarka, Korontada, Aerospace, Farsamo, iyo kuwo kale.
IIT Madras 'Waaxda Aerospace Engineering waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu fiican Hindiya. Waaxda waxaa la aasaasay 1969, toban sano ka dib markii machadka laftiisa la aasaasay, wuxuuna safka hore kaga jiray cilmi -baaris iyo horumarin aasaasi ah oo lagu dabaqay dalka oo leh saameyn cilmiyeed iyo bulsho tan iyo markaas.
Waaxda Aerospace Engineering ee IIT Madras waxay bixisaa barnaamijyo cilmi -baaris qalin -jabiya oo u horseeda Ph.D. iyo Master of Science oo cilmi baaris ah iyo sidoo kale barnaamijyo ku saleysan koorsooyin u horseeda M.Tech, B.Tech, iyo Dual Degree. Darajooyinkani waxay leeyihiin sumcad caalami ah waxaana loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ugu fiican dalka.
IIST waa hay'ad cilmi baaris dowladeed oo si gaar ah ugu heellan cilmi baarista iyo barashada sayniska hawada iyo farsamada la xiriirta. Waxay ku taal Thiruvananthapuram, Kerala, India, waxaana lagu aasaasay 2007 cilmi baarista iyo waxbarashada injineernimada hawada waxayna caan ku tahay mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya.
Undergraduate (BTech), postgraduate (MTech), doctorate (Ph.D.), iyo Dual Degree (BTech and MTech) barnaamijyada diirada saaraya sayniska hawada, farsamada, iyo codsiyada waxaa laga bixiyaa IIST's Department of Aerospace Engineering iyo Waaxda Avionics.
Waxaa la aasaasay 1985 oo ah jaamacad gaar loo leeyahay oo bixisa barnaamijyo tacliimeed xagga injineernimada aerospace, Machadka Teknolojiyadda Hindustan, oo caan ku ah HITS Chennai, waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya.
Kuleejku wuxuu bixiyaa BTech Injineerinka Aeronautical iyo Aerospace Engineering, BSc ee Avionics iyo Aviation, BBA ee Maareynta Duulista, iyo MTech ee Injineerka Aeronautical.
Machadka Sayniska Hindiya ee Bangalore waxaa la aasaasay 1909 waxaana la siiyay heerka Machadka Eminence ee 2018. Waxay leedahay Aerospace Engineering oo ah mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya. Waaxdu waxay bixisaa kaliya barnaamijka shahaadada MTech ee injineernimada Aerospace kaas oo inta badan ku saleysan cilmi baaris.
IIT Kanpur waa hay'ad farsamo iyo cilmi baaris oo ay dowladdu leedahay oo la aasaasay 1959 waxaana markii dambe Dowladda Hindiya ku dhawaaqday Machadka Muhiimadda Qaranka. Waaxda Aerospace Engineering, oo ka weyn 40 sano, waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya. Waxay bixisaa shahaadada koowaad ee jaamacadda, mastarka, doctorate -ka, iyo laba -darajo ee injineernimada hawada.
Waaxdu waxay ku takhasustay makaanikada xisaabinta, aero-thermodynamics iyo cilmiga kuleylka, aerodynamics, kicinta, makaanikada duulimaadka, iyo dhismayaasha. Waxay sidoo kale xiriir la leedahay 21 shaybaarro cilmi baaris iyo ujeeddooyin waxbarasho ah.
Sidoo kale, jaamacad farsamo iyo cilmi baaris oo ay dawladdu leedahay ama dawladdu leedahay oo ku taal Kharagpur, India, oo la aasaasay 1951, IIT Kharagpur waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada ee ugu wanaagsan Hindiya. Markii hore, machadka waxaa loo aasaasay in lagu tababaro saynisyahano iyo injineero kadib madaxbanaanida Hindiya laakiin sanadihii la soo dhaafay, waxay ku kala duwanaayeen bixinta Sharciga, Maareynta, Aerospace, iwm.
Machadkan, waxaad ku sii wadan kartaa BTech, MTech, MTech/Joint MTech-Ph.D., Iyo Ph.D. injineernimada hawada sare oo ka socota Waaxda Aerospace oo la aasaasay 1965 oo leh shaybaarro ku yaal aagagga Aerodynamics, Structures, Propulsion, System & Controls, Aeromodeling, iwm.
Iyada oo leh aragti ah in ay noqoto il wax ku ool ah oo karti u leh xoogga farsamo ee shuruudaha warshadaha ee hadda iyo mustaqbalka iyo qabashada hawlaha cilmi -baarista iyo horumarinta ee meelaha la riixo, Machadka Sathyabama ee Sayniska iyo Teknolojiyadda ayaa bixiya barnaamijyo tacliimeed tiknoolajiyadeed iyo injineernimo oo ballaaran si ay ula kulmaan ilaa hadafkeedii.
Machadku waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya wuxuuna bixiyaa barnaamijka Master-ka ee 2 sano iyo barnaamijka Bachelor-ka ee 4-sano ee injineernimada hawada. Dugsiga Farsamada wuxuu ku yaallaa Waaxda Injineerka Aeronautical oo mas'uul ka ah bixinta shahaadadan.
PEC Chandigarh waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya, Waaxda Aerospace Engineering oo bixisa waxbarasho tayo leh oo ku saabsan aerospace iyo farsamooyin la xiriira ayaa la aasaasay 1962. Waaxdu waxay ardayda siisaa BTech Injineerinka Aerospace ardayda, Hindiya iyo qaybaha kale ee adduunka, si aad u hesho aqoon, xirfado, iyo waaya-aragnimo durugsan.
Kuleejkani waa mid ka mid ah 10ka machad ee injineernimada hawada sare ee Hindiya, oo leh habraacyo waxbarasho iyo manhajyo la mid ah kuwa IITs.
Daboolida dhul dhan 600 hektar oo ku yaal Jalandhar, Punjab, LPU waxaa la aasaasay 2006 waxaana lagu aqoonsaday kuliyadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya. Waxay bixisaa kaliya 4-sano Bachelor of Technology (BTech) ee Aerospace Engineering. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay dadka barta inay dhisaan diyaaradaha, dayaxgacmeedka, dayaxgacmeedyada, iyo gantaalada.
Intaa waxaa sii dheer, ardayda waxaa loo tababaray inay noqdaan injineero tijaabiya tusaalooyinka si loo hubiyo inay u shaqeeyaan si waafaqsan qorshayaasha waxayna sidoo kale awood u leeyihiin inay naqshadeeyaan qaybaha iyo goleyaasha hoose ee farsamada sida matoorada, hawada, baalasha, iwm.
Machadka Hindiya ee Injineerinka Aeronautical ama IIAE Dehradun wuxuu siiyaa barnaamijyo Bachelor iyo HND ah Aeronautical iyo Aerospace Engineering oo ardayda siiya aragtiyo dheelitiran iyo sidoo kale aqoon wax ku ool ah. Manhajka halkan waxaa loogu talagalay inuu ardayda siiyo faham wanaagsan oo ku saabsan waxbarashada duulista iyo hawada.
IIAE Dehradun waa mid ka mid ah jaamacadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya, oo u heellan oo keliya cilmi -baarista hawada. Waxay fursad u siineysaa barnaamij waxbarasho 2 sano ah oo dibedda ah oo ka-qaybgalka goobta. Waxay la shaqaysaa tiro hay'ado caalami ah iyo bulshada Hindiya, iyo sidoo kale tiro iskuulo injineernimo oo caalami ah.
PCET waa mid ka mid ah kulliyadaha injineernimada hawada sare ee Hindiya, waxaa la aasaasay 1997 Coimbatore. Kuleejku wuxuu bixiyaa 4-sano Bachelor of Engineering (BE) ee Injineerka Aeronautical. Waxay xubin ka tahay Jaamacadda Anna ee Chennai waxayna ku xiran tahay AICTE ee Delhi.
Kulliyaddu waa mid ISO-shahaadaysay oo caan ku ah barashada injineernimada aeronautical aasaasiga ah waxayna u tahay beddel saaxiibtinimo ardayda Tamil Nadu.
Marka laga reebo in la siiyay tobanka sare ee kulliyadaha injineernimada hawada ee Hindiya, Iskuulka Aeronautics waa dugsiga ugu wanaagsan uguna dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan ee Aasiya oo ah dugsiga tababarka duulista hawada ee injineernimada hawada, injineernimada dayactirka diyaaradaha, iyo shaqaalaha qolka. Kuleejka waxaa la aasaasay 1992 welina wuxuu bixiyaa barnaamijyo tacliimeed xagga injineernimada hawada oo u horseeda BTech.
Kulliyaddu waa midda ugu horreysa ee AICTE u oggolaatay injineernimada hawada ee Rajasthan waxaana lagu qalabeeyay dhammaan tas-hiilaadka shaybaadhka ee ugu sarreeya barashada injineernimada hawada.
Kuwani waa kulliyadaha injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Hindiya waxaanan rajaynayaa inay aad wax u taraan. Si aad wax badan uga ogaato kulliyadda aad dooratay guji “Booqo bogga” kaas oo toos kuu geyn doona mareegaha dugsiga si aad wax badan uga ogaato dugsiga sida shuruudaha barnaamijka gaarka ah iyo khidmadaha waxbaridda.
13 Barnaamijyada Masters ee ugu Fiican Kanada ee Shaqooyinka
16 Shahaadooyinka Dowladda ee Onlineka ah ee Bilaashka ah, Mareykanka, Hindiya, Kuwa Kale
Post Next:6 Dugsiyada Injineeriyada Aerospace ee ugu Fiican Texas